यौनलाई अश्लील भन्नु गलत होस् साहित्यकार गौतम
Posted: 2018-05-05 09:55:52
साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतम ७४ वर्ष पुगिसके । अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी पुस्तक लेखिसकेका गौतमका २५ वटा उपन्यास प्रकाशित छन् । उनका कथा कविता पनि प्रकाशित छन् । १० वर्षको उमेरदेखि कविता लेख्न थालेका गौतम ७४ वर्षको उमेर पुग्दा पनि लेखिरहेका छन् । हरेक दिन उनी केही न केही लेखेकै हुन्छन्, लेखाइबाट उनी अझै थाकेका छैनन् । २०७४ मा उनको ‘एक आनाको जमाना’ नामक अनुभव उपन्यास प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छ । उनै गौतमसँग साहित्यको विभिन्न पाटोबारे गरिएको कुराकानीः
हामी युवा छँदा समाजले अश्लील मान्ने कुरा अहिले समाजले सहजै स्वीकार्छ । यदि यौनलाई अश्लील भन्नुभएको हो भने पनि गलत हो । के यौन अश्लील हो र ? सान्दर्भिक बनाएर यौनका कुरालाई कलात्मक ढंगले साहित्यमा उतार्दा अश्लील हुँदैन ।
पञ्चायतकाल, संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र सबै अवस्थामा तपाईंको कलम चलिरहेको छ । यस्ता राजनैतिक परिवर्तनले एउटा लेखकलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
तपाईंले पञ्चायतविरुद्धको पुस्तक लेख्दा समाजमा कस्तो प्रभाव परेको थियो ?
समाजले जसरी साहित्यलाई प्रभाव पार्छ त्यसरी नै साहित्यले पनि समाजमा प्रभाव पर्छ । पञ्चायतकालमा मैले ‘डापी’ पुस्तक लेख्दा एउटा घनको काम गरेकै हो । त्यस्तै अरू धेरै घनहरु ठोकिँदै गए र त्यो शासन व्यवस्था हट्यो । एक झटारोले परिवर्तन हुँदैन, त्यहाँ त सयौं झटारोहरु पर्न आवश्यक छ । ५ जनाले पढे पनि ५ जनाको मानसिकता त परिवर्तन हुन्छन् । त्यो बेला प्रभाव भने राम्रै परेको थियो ।
यो गलत हो । तपाईं केलाई अश्लीलता मान्नुहुन्छ त्यसले फरक पार्छ । हामी युवा छँदा समाजले अश्लील मान्ने कुरा अहिले समाजले सहजै स्वीकार्छ । यदि यौनलाई अश्लील भन्नुभएको हो भने पनि गलत हो । के यौन अश्लील हो र ? सान्दर्भिक बनाएर यौनका कुरालाई कलात्मक ढंगले साहित्यमा उतार्दा अश्लील हुँदैन ।
व्यक्तिगत प्रसंगतिर जाउँ है त । तपाईं कतिबेला पढ्नुहुन्छ ?